Ndị Hispanik mefuru ijeri $ 113.9 na njem ime ụlọ na 2019
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ndị Hispanik mefuru ijeri $ 113.9 na njem ime ụlọ na 2019
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Caribbean • Ịtụ egwu • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ebe atọ kacha elu maka ndị njem Hispanic n'otu abalị bụ California (21%), Texas (15%) na Florida (14%). Nke a dabara na steeti atọ nwere ọnụ ọgụgụ kacha elu nke ndị bi na Hispanic.
Imirikiti ndị njem Hispanic (85%) agaala mba/ókèala nke ihe nketa ezinụlọ ha, ebe 15% na -alọta ihe karịrị otu ugboro n'afọ na 22% na -alaghachi kwa afọ.
Pasent iri asaa na asaa kwetara na ha yikarịrị ka ha ga-aga ebe na-anabata omenala ndị Hispanik ma na-eme mmemme azụmahịa na onyinye ndị Hispanik.
Ebe atọ kachasị elu maka ndị njem Hispanic njem abalị bụ California (21%), Texas (15%) na Florida (14%).
Ọmụmụ ihe ọhụrụ nke na -akọwa mkpa, nchegbu na akparamagwa ndị njem Hispanic na United States ka ewepụtara taa.
Akụkọ "Vistas Latinas: Ọmụmụ ihe dị ịrịba ama na ndị njem US nke agbụrụ Hispanic", nke aha ya pụtara Latin echiche, bụ nyocha njem mbụ n'ụdị ya iji nyochaa akparamagwa, echiche na mmetụta ndị njem sitere na otu igwe mmadụ na -eto ngwa ngwa na United States.
Vistas Latinas bụkwa ọmụmụ izizi iji nyochaa ike mmefu nke ndị njem Hispanic US, na -achọpụta na ha mefuru ijeri $ 113.9 na njem ezumike ụlọ na 2019 wee gụọ 13% nke njem ezumike ụlọ niile n'afọ ahụ.
Ndị njem Hispanic & Nnọchiteanya
Onu ogugu ndi Hispanic nke America bu ihe na -agbaze nke ọdịbendị bara ọgaranya, yabụ ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị ọkachamara njem njem ejirila ụzọ dị ọhụrụ wepụta nyocha ahụ iji gosipụta nkesa nke ndị Latino na United States.
N'ime ndị nyochara Vistas Latinas - ọtụtụ kwuru na amụrụ ha na United States (83%) na imirikiti gosiri na amụrụ nne na nna ha na US Ọkara ndị zara zara gosiri na ezinụlọ ha sitere Mexico, ebe otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị zara ajụjụ a jụrụ ajụjụ kwuru na ha bụ Caribbean ihe nketa (Puerto Rican, Dominican ma ọ bụ Cuba).
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu - 80% nke ndị njem Hispanic - na -ahọrọ ka a mata dị ka ndị Hispanik, ebe 25% na -ahọrọ Latino/Latina na 3% na -ahọrọ okwu Latinx (ndị na -azaghachi nwere ike họrọ karịa otu okwu ahọrọ).
Pasent iri ise na abụọ nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha nwere ike ịga ebe ma ọ bụrụ na ha ahụ nnọchite anya Hispanic na mgbasa ozi na/ma ọ bụ ngwa ahịa.
Ndị njem Hispanik na -erikarị ụdị mgbasa ozi na Bekee.